Google သည် SEO လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကိုမြှုပ်နှံနေသည် Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဇူလိုင်လ 23, 2012 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 8, 2013 Douglas Karr
ငါ post ကိုရေးသားခဲ့သည်, SEO ဆိုတာသေပြီနောက်ကျောAprilပြီလ။ ငါနေဆဲကြောင်းယခင်ကထက်ယခုတကယ်တော့ ... တကယ်တော့ယခုရပ်နေ။ ဤရာထူး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာရှာဖွေရေးယန္တရားကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်သောအွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာအဖြစ်မတိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားများအားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်ပတ်သက်သောလူကြိုက်များသည့်နည်းဗျူဟာများနှင့်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုများဆီသို့ ဦး တည်သွားစေရန်ဖြစ်သည်။
SEO နည်းဗျူဟာများနှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်မရှိသောသူများအတွက်ဆိုဒ်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချခြင်းသည်နည်းဗျူဟာများစွာပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပါဝင်သည် အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွေဆီကိုတင်ထားတယ်။
သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်း ဆိုဒ်အဆင့်ဆင့်နှင့်လမ်းညွှန် သင့်ရဲ့ content တွေကို ဦး စားပေးနိုင်ရန်အတွက်တင်ဆက်နိုင်အောင်။
သော့ချက်စာလုံးများကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုခြင်း သင်၏လုပ်ငန်းအတွင်းရှိကုန်ပစ္စည်းများ၊ ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည့်သူများကဲ့သို့သင်၏အကြောင်းအရာအတွင်းသော့ချက်စာလုံးများနှင့်စကားစုများကိုအသုံးပြုနေကြောင်းသေချာစေရန်။
ယခင်ပစ္စည်းများအားလုံးသည်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုကောင်းမွန်စွာပုံဖော်ထားသော်လည်း SEO အေဂျင်စီများသည်၎င်းတို့၏နယ်နိမိတ်ကိုကျော်လွန်ပြီးချိတ်ဆက်မှုအစီအစဉ်များ၊ လမ်းညွှန်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝြေခင်းကွန်ယက်များပါ ၀ င်သည့်ပြင်ပရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထုတ်ဖော်ခြင်းမရှိဘဲ။ တစ်နည်းပြောရရင်တော့… နောက်ကြောင်းပြန်.
လှည့်စားရန်ဆန္ဒမရှိကုမ္ပဏီများနှင့်အေဂျင်စီများအဘို့, backlinking ကြီးမားတဲ့ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ရိုးရိုးပုံမှန်အေဂျင်စီဖြစ်သည် ယှဉ်ပြိုင်လို့မရဘူး SEO အေဂျင်စီများနှင့် backlinking အစီအစဉ်များသို့ကြီးမားသောဒေါ်လာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။ သို့သော် backlinking နှင့်ပတ်သက်သော ၀ င်ငွေသည်အေဂျင်စီ (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအတွက်အလွန်ကောင်းသည်၊ Forrester.
Google's Panda algorithm အပြောင်းအလဲသည်စစ်ကိုစတင်ခဲ့သည်၊ ထပ်ဆောင်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်များကိုဖမ်းယူနိုင်ရန်သိသိသာသာကျယ်ပြန့်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုတစ်ညတည်းဖယ်ရှားခဲ့သည်။ Google Penguin သည်နောက်ထပ်လူမှုရေးလွှမ်းမိုးမှုများပိုမိုထည့်သွင်းရန်နှင့်သော့ချက်စာလုံးများအတွက်အလွန်အကျွံအသုံးပြုထားသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုပင်ပြန်လည်တွန်းပို့ခဲ့သည်။ ဤတိုးတက်မှုများသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေသော်လည်းစစ်မှန်သောပြissueနာကိုသူတို့မတိုက်ခိုက်သေးပါ။ နောက်ကြောင်းပြန်.
ဂူဂဲလ်သည်ဤကဲ့သို့သောမက်ဆေ့ခ်ျများကိုကုမ္ပဏီများသို့ပါ ၀ င်စေနိုင်သည် သဘာဝမဟုတ်လင့်များ:
ဒါကထိတ်လန့်စရာရှာဖွေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်နောက်ပြန်ချိတ်ဆက်မှုပြုသည်ကိုတွေ့သောအခါယခင် SEO အေဂျင်စီတစ်ခုအားအမှန်တကယ်ထုတ်ပယ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ပျက်စီးမှုကိုလုပ်ပြီးပြီ။ နောက်ကျတယ် သူတို့ဘယ်လိုနောက်ကြောင်းပြန်ပြန်နှင့်လင့်များဖယ်ရှားပစ်နိုင်သလဲ ကျန်တဲ့တစ်ထောင်ကျော်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှု့ခွင့်မရတဲ့ဆိုဒ်များ၊ ကွန်ယက်များနှင့်လမ်းညွှန်များကို! Google ကဖြစ်ကောင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် disavow tool အချို့ကိုထည့်ခြင်း ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူများထံမှသင်၏အခြေခံကျသောဆက်နွယ်မှုများကိုအခြေခံအားဖြင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရှာဖွေနိုင်သည်။
ဂူဂဲလ်၏အရည်အသွေးနှင့် spam များကိုလုပ်ကိုင်ပြီး၎င်းတို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်လူမှုမီဒီယာတွင်ပါဝင်သော Matt Cutts ကကုမ္ပဏီများအားပြောကြားခဲ့သည် ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ရန်မလိုပါ သို့မဟုတ်အစီရင်ခံစာတုံ့ပြန်။ ငါကပြtheနာကိုရှင်းလင်းသို့မဟုတ်နောက်ထပ်ရှုပ်ထွေးမှုများထည့်သွင်းခြင်းရှိမရှိမသေချာဘူး ... ဒါပေမယ့်အောက်ဆုံးလိုင်းနေ့ကဲ့သို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်း။ နောက်ဆုံးတွင် Google သည် SEO လုပ်ငန်းကိုဖျက်သိမ်းရန်အလေးအနက်ထားသည်။
သင်၏ SEO သည်အေဂျင်စီဖြစ်လျှင် နောက်ကြောင်းပြန်မပြည့်စုံဘူး ထုတ်ဖော် သူတို့အားလင့်များနှင့်ထုတ်လုပ် သဘာဝမဟုတ်လင့်များ ဂူဂဲလ်ရဲ့စည်းကမ်းချက်များအရ၊ သင်ဟာအဲဒီစာချုပ်ကိုချက်ချင်းပယ်ဖျက်ပြီးသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုစွန့်စားနေကြသည်။
Tags: ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စက်ရုံရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationseo သေတော့မယ်seo စက်မှုလုပ်ငန်းseo သေပြီ
Brady Landry ပါ
26:2012 pm တွင်ဇူလိုင်လ 5, 58
27:2012 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 32
အမှန်မှာ“ SEO အထူးကျွမ်းကျင်သူများ” သည်မည်မျှရှိသနည်း။
31:2012 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 28
@ facebook-100003109495960: ကံမကောင်းတာက၊ ကံမကောင်းတာက SEO အထူးကျွမ်းကျင်သူတော်တော်များများဟာသူတို့ရဲ့နားလည်မှုအတိုင်းအတာကို algorithms ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်၊ site တစ်ခုဘယ်လိုအဆင့်သတ်မှတ်ရမယ်ဆိုတာကိုကန့်သတ်ထားတယ်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာများကိုပိုမိုနားလည်ရန်သူတို့လိုအပ်သည်။ ငါကစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ကြီးသောဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ... ဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီအများအပြားထွက်ခေါက်လိမ့်မယ်!
မတ်လ 9, 2013 မှာ 9: 08 AM
ဒါအရမ်းမှန်ပါတယ် ဂူဂဲလ်၏စံနှုန်းများသည်ရွှေစည်းမျဉ်းကို“ အကြောင်းအရာသည်ဘုရင်ဖြစ်” သည်မှန်ကန်စေသည်။ သူတို့သည်ယခုထက်မြက်လာပြီး SEO ကိုသာမကအရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေကြသည်။ တကယ်တော့အခုဆိုရှယ်မီဒီယာကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုသင်ယူရတော့မယ်။
27:2012 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 43
Doug post Google မှမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောနောက်ဆုံးသတင်းများနှင့် SEO လူအများကြားရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားရန် Google သည် SEO အကြောင်းပြောဆိုခြင်းကိုမည်မျှပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမြင်တွေ့ရပြီးနောက်“ ဂူးဂဲလ်သည် SEO လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်အားနည်းနေသည်” ဟုမထင်ပါ။ ဂူးဂဲလ်သည်အသုံးပြုသူအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုပေးလိုသည်။ ထိုအတွက်သူတို့သည်“ ပိုမိုကောင်းမွန်သော SEO ကုမ္ပဏီများ” ကိုလိုချင်ကြသည်။ ပြောင်းလဲနေပါတယ် ယခုအခါ၎င်းသည်ကျောက်ဆူးစာလုံး (Penguin) အနေဖြင့်အတိအကျသောသော့ချက်စာလုံးများဖြင့် backlink များကိုဖန်တီးရန်မဟုတ်ပါ။ SEO ဆိုသည်မှာလူမှုရေးအပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောအချက်အလက်များပေါင်းစပ်မှုဖြစ်လာသည်။
27:2012 pm တွင်ဇူလိုင်လ 5, 56
Seo သည်မသေနိုင်သော်လည်းအသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်အရဂူးဂဲလ်သည်လင့်ခ်တည်ဆောက်ခြင်းတွင်အပြောင်းအလဲအချို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဂူးဂဲလ်သည် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်များကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန် seo ကိုသိက္ခာမဲ့စွာအသုံးပြုခြင်းအတွက်သူ၏ algorithm ကိုအချိန်မီ update လုပ်သည်။
ဧပြီ 16, 2013 မှာ 11: 29 AM
သေလုနီးပါး seo သာမက Seo နည်းဗျူဟာကိုအသုံးမပြုသူများသာအနက်ရောင် ဦး ထုပ် seo သည်ယခုသေသွားပြီ Penguni 1, 2,3ကို update လုပ်ပြီး google search graph ကိုပြောင်းလဲပြီး Panda ပါဝင်သောပြစ်ဒဏ်များနှင့် google make မှရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုဖယ်ရှားသောကြောင့် Penguin update4လာနေတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
ဧပြီ 16, 2013 မှာ 11: 37 AM
Great Post! Google ဟာအရာရာကိုပြောင်းလဲနေပါတယ် ဒီအပြောင်းအလဲအားလုံးကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်နိုင်မလဲ။
ဧပြီ 16, 2013 မှာ 12: 12 pm တွင်
အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ SEO ကိုအာရုံစိုက်ခြင်းအားရပ်တန့်ရန်နှင့်ကြီးလေးသောအကြောင်းအရာများကိုရေးသားခြင်း၊
ဧပြီ 21, 2013 မှာ 5: 56 pm တွင်
သူတို့ကိုနှိပ်ပါ @ သူတို့ကိုအမှတ်အသားလုပ်ပါ
11:2013 pm တွင်သြဂုတ်လ 11, 04
Seo ကုမ္ပဏီများစွာသည်သူတို့၏စီးပွားရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုအနေဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာ (သို့) အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများသို့ဝင်ရောက်ရန်အလွန်အမင်းကြိုးစားနေခြင်းကိုတွေ့မြင်ရသည်။ ပြနာကသူတို့ဟာလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအမျိုးအစားများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုအစုံများဖြစ်သည်။